3 manomano ekuti imba inonhuwirira zvakanaka | Bezzia
3 manomano ekuti imba inhuwirira
Toñy Torres | 11/09/2021 16:00 | Musha
Kumba kwakanaka kunhuwirira kwakakosha kuti unakirwe nharaunda yakachena uye inogamuchira musha. Kuti uite izvi, zvinofanirwa kuchengetedza hutsanana uye hutsanana mukamuri yega yega yemba yako. Asi kungochenesa hakuna kukwana, nekuti dzimwe nguva vamwe vanozvipira zvikanganiso zvisingatenderi kuti imba iwaniswe hutsanana. Kuti ugare uchiita kuti imba inhuhwire zvakanaka, unogona kutevedzera mamwe manomano.
Uye hazvisi zvekuvharidzira hwema hwakaipa nemweya unozorodza kana zvinonhuwira zvekugadzira. Iko kiyi iri mukuchena, mukufefetedza kwemazuva ese kweimba uye mune zvakadzama zvinowanzo kufuratirwa, munzira yekuchenesa. Kana iwe uchida kuita kuti imba inhuwirira, isu tinokuudza imwe yacho ipapo ipapo matipi ekuzviita nenzira iri nyore, yakapusa uye yakasimba.
1 Kuti imba inonhuwirira zvakanaka inotanga nemweya wakanaka
1.1 Kuchenesa imba nekuchenesa zvinhu
1.2 Tricks yekuwana kunhuwirira kwakanaka kumba
Kuti imba inonhuwirira zvakanaka inotanga nemweya wakanaka
Kuuya kumba mushure mezuva refu rakaoma kubasa ndizvo zvinotora kuzorora kwakakodzera. Asi kana imba isina kuchena, pasina munhuwi wakanaka kana paine kurongeka kwakaipa, zvinonyanya kuoma kunakidzwa nemamiriro ehupenyu anofanirwa kupihwa nemusha. Kufefetedza kwakanaka ndiyo kiyi yekuita kuti imba inhuhwe uye hazvidiwe kuti mahwindo avhurike zuva rese.
Kuvhura mahwindo kwemaminetsi gumi nemashanu kusvika makumi maviri mangwanani kwaringana. Vhura mubhedha kuti mweya mweya machira usati wagadzira mubhedha. Tsvaga yazvino kuti uwane muchinjikwa mweya, izvi zvichanyanya kushanda. Nechiitiko ichi chakareruka chezuva nezuva iwe unozokwanisa kubvisa hwema hwakaipa kubva mumakamuri.
Kuchenesa imba nekuchenesa zvinhu
Iko hakuna kushandisa kushandisa maawa kuchenesa kana ukasashandisa nguva yekuchenesa maturusi ekuchenesa. Mapadza ekutsvaira nemachira emukicheni, mopu, mutsvairo kana chero yemidziyo inowanzo shandiswa kutsvaira. Zvese zvishandiso izvi zvinochengeta zvisaririra uye zvisaririra izvo kana zvisina kucheneswaIzvo zvakare zvinogadzira kunhuhwirira kwakashata, mabhakitiriya, fungi uye zvidiki zvinokuvadza kuhutano.
Kuti udzivise izvi, iwe unofanirwa sanisa midziyo yekuchenesa yese kazhinji, kana zvichibvira mushure mekushandisa kwega kwega. Saka kana iwe uchifanira kuzoshandisa izvo zvishandiso kuti utsvage, unenge uine iwo mune zvakakwana mamiriro ekusiya imba yakachena uye isina hwema hwakaipa. Mopu yakasviba, jira rine zvisaririra zvekudya kana mutsvairo une zvisaririra kubva pasi, zvinongoshanda chete kugovera ivhu zvakanyanya. Dzivisa basa rakapetwa ne just chengetedza zvigadzirwa zvako zvekuchenesa nguva dzose zvakagadzirira.
Tricks yekuwana kunhuwirira kwakanaka kumba
Kuwedzera kune kufefetedza kwemazuva ese uye nekuchenesa, unogona kushandisa mashoma ekuchengetera imba yako kunhuwirira zvakanaka nguva dzese. Hongu zvirokwazvo, nzvenga mishonga ine hwema hwenhema nekuti iwe unozongokwanisa kufukidza uye kwete kubvisa chinokonzeresa hwema hwakaipa. Panzvimbo iyoyo iwe unogona kuyedza imwe yeaya manomano:
Gadzirira mudziyo wekupfapfaidza uye sanganisa mvura neyekugadzirisa machira. Mazuva ese usati warara mubhedha, pfapfaidza machira nemusanganiswa uyu kuitira kuti mubhedha ugare uchinhuwirira kunge uchangobva kuwachwa.
Mucheka masaga nemaruva akaomeswa. Lavender yakakwana kunyangwe iwe uchikwanisawo kushandisa potpourri uye madonhwe mashoma eunofarira hwema. Isa machira anonhuwirira mukati memakabati, pakati pemubhedha wakachena uye kunyangwe mumakona eimba yako senge panopinda imba yako.
Bicarbonate mumatukisi. Makapeti nemicheka gobvu seiya iri pasofa zvinonetsa kusuka uye zvinowanzounganidza tsvina yakawanda, iyo inogadzira hwema hwakaipa. Kamwe chete pasvondo, pfapfaidza yakaoma soda pasipeti uye pasofa. Mangwanani anotevera iwe unotofanira kudaro Vacuum uye bicarbonate ichabvisa hwema hwakaipa.
Aya ese matipi achakubatsira iwe kuchengetedza imba isina hwema. Asi iwe unogona zvakare kushandisa mhinduro dzinovewo dzekushongedza, senge makenduru ane hwema, zvinopisa hwema kana maruva akaomeswa. Nezviito zvidiki iwe unowana imba yekugamuchira inogamuchirwa kwaunogona kuzorora uye kunakidzwa netembere yako yerunyararo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » 3 manomano ekuti imba inhuwirira
Maitiro ekudzivirira mablister patsoka dzako kana uchimhanya
Vitamin B3: Zvakanakira, chikafu uye zvimwe zvakawanda